Wararka - Lix isbeddel oo waaweyn oo saameeya maalgashiga qalabka cusub ee baakadaha bilister-ka
Lix isbeddel oo waaweyn oo saameeya maalgashiga qalabka cusub ee baakadaha bilisterka
Sida laga soo xigtay warbixin cusub, saddex-meelood saddex meelood oo ka mid ah jawaab-bixiyeyaasha qalabka baakadaha batteriga ayaa sheegay in shirkadahooda ay rajeynayaan in ay sameeyaan maalgashi raasumaal ah 12-24 bilood ee soo socda, ama dib u hagaajinta qalabkii hore ama iibsashada qalab cusub. Xeerarka, iyo sidoo kale kharashka iyo soo celinta maalgashiga. Xeerarka iyo carqaladaynta ay sababtay COVID-19 ayaa sidoo kale horseeday baahida qalab cusub iyo mid horumarsan.
Automation: In ka badan 60% habaynta baakadaha bilister-ka baytari iyo shirkadaha adeegyada la xidhiidha ayaa sheegay in haddii ay fursad u helaan, ay dooran doonaan in ay si otomaatig ah u shaqeeyaan, iyo gelitaanka fog ayaa noqon doona mid aad muhiim u ah.
Shirkaddu waxay maalgelinaysaa mishiinno horumarsan si loo kordhiyo xawaaraha baakadaha iyo hufnaanta. Tusaalooyinka qalabka wax-soo-saarka otomaatiga ah waxaa ka mid ah:
Nidaamka calaamadeynta wuxuu ku dhejiyaa warqad duuban ama warqado ku duuban weelasha xawaare dhan 600+ daqiiqaddii.
· Foom-Fill-Seal Technology, taas oo adeegsata hal qayb oo qalab ah si ay u samayso weel caag ah, buuxinta weelasha iyo bixinta daboolka hawo-ku-xidhka ee weelasha.
Iyada oo ay ugu wacan tahay qiimaha aan la taaban karin iyo shaabad gooni ah oo adag, mashiinnada baakadaha baakadaha tooska ah ayaa noqda kuwa aad caan u ah.
Tignoolajiyada dhijitaalka ah, Internetka Waxyaabaha, iyo blockchain waxay ka caawinayaan shirkadaha inay ku xidhaan mashiinadooda aaladaha smart, cilad-samaynta iyo ka warbixinta khaladaadka, wanaajiya hawlaha, helaan aragtiyo ku saabsan xogta u dhaxaysa mishiinada, oo ay diiwaangeliyaan dhammaan silsiladaha sahayda.
Is-maamulka ayaa noqday mid aad u badan, sidaas darteed wax soo saarka qalabka is-mudidda iyo irbadaha horay loo buuxiyey ayaa kordhay.Shirkaddu waxay maalgashanaysaa isku-dhafka iyo buuxinta qalabka si loo gaaro waqtiyo isbeddel ah oo degdeg ah oo loogu talagalay autoinjectors kala duwan.
Daawooyinka gaarka loo leeyahay ayaa keenaya baahida mashiinada xiri kara dufcyo yaryar oo leh waqtiyo rasaaseed ka gaaban.
Baakadaha dhijitaalka ah ee si toos ah ula xidhiidha macaamiisha si loo xaqiijiyo la socodka caafimaadka iyo horumarinta natiijooyinka daaweynta bukaanka.
Kordhinta joogtada ah ee noocyada alaabooyinka, shirkadaha baakadaha ayaa sii kordhaya waxay u baahan yihiin wax soo saar dabacsan oo mashiinnada laga beddeli karo hal cabbir oo badeecado ah. cabbirada, iyo qaababka, iyo mashiinada la qaadan karo ama yar yar ayaa noqon doona isbeddel.
Joogteynta waa diiradda shirkado badan sababtoo ah waxay rabaan inay yareeyaan qashinka oo ay kordhiyaan waxtarka kharashka. Baakadaha ayaa noqday mid aad u saaxiibtinimo deegaanka, iyada oo xooga la saarayo alaabta iyo dib u warshadaynta.
Si aad u aragto otomaatignimada baakadaha bilister-ka batteriga, baakaynta iyo xalalka alaabta, fadlan ka eeg macluumaad dheeraad ah shabakadeena.
Waqtiga boostada: Dec-22-2021